Billie Eilish inosimudzira Apple Music's spatial odhiyo | Ndinobva mac
Billie Eilish inosimudzira Apple Music's spatial odhiyo
MunaMay Apple yakazivisa kuti yaisanganisira ruzha «CD mhando»Uye nzvimbo yekuteerera paApple Music. Vashandisi vanotizivisa nezvekuvandudzwa kwetekinoroji vatove kuziva nhau, asi pamwe vazhinji vevashandisi veApple Music havasati vaziva.
Saka Apple yakahaya muimbi Billie Eilish kusimudzira zvinyorwa zvitsva zveApple Music. Uye ari kuzviita neAlbum yake nyowani "Anofara Kupfuura Kwese."
Muimbi anozivikanwa weAmerica Billie Eilish ari kuita kusimudzira kwakapetwa kamwechete. Kune rimwe divi, kubva kualbum yake nyowani «Kufara Kupfuura Kare«Uye kune imwe yacho, iyo nyowani isina kurasikirwa odhiyo neDolby Atmos kurira maficha anopiwa neApple Music.
Dambarefu remuimbi iri rinowanikwa paApple Music nerutsigiro rwemhando yekurasa odhiyo, Dolby Atmos ine spatial odhiyo, uye inonziwo "Apple Dhijitari Tenzi".
Iye pachake anokukoka kuti uteerere nziyo dzake nyowani kuburikidza nezwi raunopihwa naApple Music maari promotional vhidhiyo. Teerera kurira zvakakupoteredza. Teerera kuAlbum album itsva "Happier Than Ever" na Spatial Audio paApple Music »anodaro kukwidziridzwa.
Kwekupedzisira May, Apple yakazivisa kuti isina kurasikirwa odhiyo, zvakare Dolby Atmos neSpatial Audio yakaiswa muApple Music. Aya maficha akaburitswa munaJune, uye kubva ipapo, kwave kuine raibhurari iri kukura yenziyo vachishandisa aya matekinoroji matsva.
Apple yakavimbisa kuti raibhurari yayo yese icharatidza izvi zvitsva zvisina kurasikirwa odhiyo maficha e Kupera kwegore, asi zvakare zviri kune maartist kugona uye kugadzira mimhanzi ine spatial odhiyo rutsigiro. Mazita makuru saTaylor Swift, maBeatles, Lady Gaga, Ariana Grande, naBillie Eilish pachavo vane mamwe maalbham nerudzi rutsva urwu rwe 3D odhiyo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Music » Billie Eilish inosimudzira Apple Music's spatial odhiyo
Zoom inowedzera yekutarisa mode basa kudzikisira zvinokanganisa
1Password inozivisa vhezheni 8 neyakagadziriswazve graphical interface